Mgbe m wusịrị ihe karịrị 5,000 nke weebụsaịtị karịa ọtụtụ afọ a jụrụla m ọtụtụ "" Olee otu m ga-esi malite azụmahịa dị n'ịntanetị? "
Akwụkwọ a bụ azịza nye ajụjụ a!
I kwesiri iso "Ihe omume" akọwapụtara na akwụkwọ a, na iwu ha na-akọwa, ma ịchọrọ ịmepụta otu weebụsaịtị eCommerce maọbụ ọtụtụ, usoro ahụ bụ otu ihe ahụ. Enwekwara m njikọ na ngwaọrụ ndị m na-eji kwa ụbọchị iji rụọ ọrụ nke ọma na ịmepụta weebụsaịtị m.
Ọ bụrụ na ị sonyere anyị "Ndụ ndụ niile n'efu" ị ga-enweta ihe niile emelitere nsụgharị nke eBook free na tupu ọkwa nke ndị ọzọ free eBooks na ọzụzụ vidiyo anyị na-ebipụta.
Iji gụpụta "Nzọụkwụ Nri" maka ONLINE! NKWES PleaseR join Biko sonyere na Membersbụ Ndị Ndụ efu a - ị ga-enwetakwu ikike inweta ọzụzụ, vidiyo, eBooks na mmelite;
Jikọọ ugbu a ọ bụ Free
Yabụ ịnọ ọdụ ebe ahụ na-eche 'Achọrọ m ịkpata ego n'ịntanetị' - ebe ụwa ka m ga-amalite!
Jide iko tii ma ọ bụ kọfị ma chọta ebe
dị njikere ịgụ na…,
Ndewo, Abụ m Carl Henry, arụwo m ọrụ site na ụlọ, na-ewu ọtụtụ azụmaahịa na 39 dị iche iche, ebe ọ bụ na 1978 na m na-enweta ego n'ịntanetị kemgbe 1998. Etuwo m na na gburugburu Monaco kemgbe afọ 2000.
Ebumnuche nke ebook a bụ inye gị ozi ị chọrọ n'oge kachasị oke, na ọnụ ọgụgụ dị ole na ole ka i wee malite ime ozugbo.
N'aka ozo achoro m inye gi “ịdị mma abụghị ọtụtụ ”.
Ozi a na-elekwasị anya na-ewu ụlọ usoro azụmahịa azụmahịa ebe nrụọrụ weebụ site na mmalite echiche iji nweta ebe nrụọrụ weebụ bipụtara. Ọ bụrụ na ị nwere ebe nrụọrụ weebụ, eBook a nwere ike inyere gị aka ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ma ọ bụ wuo ego gị n'ịntanetị ma nwee ebe nrụọrụ weebụ gị ga-arụ ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ maka azụmahịa ma ọ bụ nzukọ gị.
A na-ekpuchi ụzọ niile dị mkpa banyere ịmalite azụmahịa dị n'ịntanetị. Agbanyeghị na a kọwara ụfọdụ isiokwu na nyocha maka na ha chọrọ akwụkwọ nke ha nke ọma ịghọta ya nke ọma. Ozi ọma ahụ bụ na ebipụtala m eBooks zuru ezu banyere isiokwu ndị a ma ọ bụ na m ga-ebipụta akwụkwọ ozi ọhụrụ eBooks n'oge na-adịghị anya - sonyere anyị "Ndụ ndụ niile n'efu" ka a mara gị na akwụkwọ ọhụrụ na vidiyo na-adị.
Kedu ihe mere m ji enye ihe ọmụma na ọzụzụ?
Ọ dị mma na anaghị m enyecha ihe ọ bụla n'ihi na akwụkwọ a na ozi ndị ọzọ na-ere site na ebe nrụọrụ weebụ m na nyiwe ndị ọzọ dị ka Amazon, ọ bụ ezie na m chọsiri ike iwulite mmekọrịta dị ka ọtụtụ mmadụ dị ka o kwere mee, ana m eme ka nke a bụrụ n'efu nye ndị otu na ndị debanyere aha akwụkwọ akụkọ maka obere oge.
Ọ bụrụ na ndị mmadụ na-enwe obi abụọ na achọrọ m igosi ihu ọma m na ihe ọmụma n'ọdịnihu ka ị mara na ọ bụrụ na ịzụta ihe n'aka m n'ọdịnihu, a ga-enwe oke mma ma ọ ga-arụ ọrụ maka gị.
Ọ bụrụ na ị na-enwe mmasị n'akwụkwọ a ma chọpụta na ọ bara uru ị nwere ike inye onyinye mgbe niile ma ọ bụ ịzụta oyiri n'ọdịnihu.
Mgbe m bidoro ịre ahịa n'ịntanetị na 1998 ihe niile dị ọhụụ ma ọ nweghị onye maara ihe ha na-eme, enwere enyemaka ma ọ bụ ọzụzụ dị ntakịrị mana ọ dị mfe azụ na mgbe ahụ n'ihi na asọmpi pere mpe - taa enwere ozi dị ukwuu na ọ karịrị akarị!
Ekpebiri m ịmepụta ọzụzụ na ozi nke 'na-agbada' data niile dị na ntanetị gaa na ntụzịaka ndị dị mkpụmkpụ na usoro ịme ihe, dị ka ihe ọ bụla dị n'ụwa a, na-enwekarị ụzọ ọsọ ọsọ ma kwụ ọtọ karịa iji rụọ ọrụ.
Ekwere m nkwa idobere ihe ozugbo dị ka o kwere mee, ma duzie gị n'ụzọ ziri ezi iji “usoro mmezi” sonyeotu Ụlọ Ahịa Ịntanetị A Na-akpaghị Aka site na ebe nrụọrụ weebụ dị, ma ọ bụ, mepụta ọhụrụ nke ahụ dị ka akpaaka dị ka o kwere mee.
Akụkụ gị bụ itinye ndụmọdụ m n'ọrụ, adala mba ma echekwala ya - Nọgide! Na-eme Ihe! Malite obere ma gbasaa n'usoro na nchịkọta gị na agwa gị.
Ọ DỊ MMA! Anyị agaba! Na mgbakwunye na mmeghe n'ogo niile nke Internetntanetị na ụfọdụ nyocha onwe gị ịchọrọ ịme ka etinyela m ọtụtụ eme ihe na m na-adụ gị ọdụ ka iwere onwe gị n'Ịntanet. Enwere isi nzọụkwụ itoolu na ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ site n'aka ha na-eme ihe ọ bụla ị ga-eme ka ị guzosie ike n'ịntanetị ma were nzọụkwụ mbụ iji mee ka Intanet bụrụ ngwá ọrụ ọhụrụ ga-enyere gị aka ịga nke ọma.
Iji gụpụta "Nzọụkwụ Nri" maka ONLINE! NSO ANYA Biko sonyere na ndi otu anyi a na adighi inabata
Ị ga-enwetakwa Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ ndị ọzọ, Videos, eBooks na mmelite;
Pịa ebe a iji gụọ ọzọ omume nzọụkwụ -Members Naanị :-)